🥇 ▷ Samsung Galaxy Fold Laun wuxuu ka bilaabay Hindiya Oktoobar 1: Warbixin ✅
Samsung Galaxy Fold Laun wuxuu ka bilaabay Hindiya Oktoobar 1: Warbixin
Ka dib markii ay bilaabeen Galaxy Fold ee Kuuriyada Koofureed horaantii bishaan, Samsung ayaa sida muuqata ay dhamaantiis diyaar u tahay inay aaladda u keento India isbuuca soo socda. Taasi waa sida laga soo xigtay IANS, oo soo xiganeysa ‘ilo aad loo meeleeyay’ si ay u soo sheegto in shirkaddu ay bilaabi doonto taleefanka casriga ah ee aadka loo sugayay ee dalka gudihiisa Oktoobar 1. Shirkadda toddobaadkan si rasmi ah u xaqiijisay in taleefanka laga heli karo iibsashada. Mareykanka laga bilaabo Sebtember 27.
Ma jiro wax hadal ah oo ku saabsan sida taleefanka loogu soo dallici doono Hindiya, laakiin haddii sumcadeeda ay ku yaalliin Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed ay wax kastaa socdaan, waxay u egtahay inaysan fiicneyn. Telefoonka waxaa lagu qiimeeyay 2.398 milyan oo lagu guuleystay South Korea iyo $ 1,980 Mareykanka, labadaba waa ku dhawaad ​​sax ahaan Rs. 1.4 lakh lacagta Hindida, laakiin iyada oo loo badinayo in loo soo dhoofin doono sida unugyada CBU, waxaa lagayaabaa in lagu sarreyo xitaa halkan sare.
Haddii aadan horey u ogayn, Galaxy Fold waxaa loo soosaaray Galaxy S10 iyo S10 Plus bishii Febraayo ee la soo dhaafay, waxaana markii hore loo qorsheeyay in si caalami ah loo bilaabo dhammaadka Abriil, ka hor inta aysan soo bixin warbixinno xunxun. marin u helida cutubyada dib u eegista rasmiga ah. Isaga oo aan dooneynin inuu ku celiyo dib-u-dhaca Galaxy Note 7 ee sumcadda leh isagoo sii daayay weli shey kale oo cilladaysan, Samsung ayaa dib u dhigtay bilaabista taleefanka cusub, iyadoo sheegtay in la bilaabi doono kaliya kadib markii arrimaha oo dhan la xalliyo.
Imika oo qalabku u muuqdo mid diyaar u ah waqtigiisa koowaad, waxaa laga bilaabay suuqyo badan oo adduunka ah, oo ay ku jiraan Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Mareykanka. In kasta oo ay shirkaddu qorsheyneyso in ay ku bixiso moodal 5G-karti ah ikhtiyaar u ah inta badan gobolladaas, Hindiya ayay u badan tahay in ay ku qancin doonto noocyada 4G, marka la eego in shabakadaha 5G ay wali ka fog yihiin sidii ay waddanka uga noqon lahaayeen mid run ah.